कति वर्षको उमेरदेखि , कुन उमेर, कुन समयमा महिलालाई बढी ‘यौ’,न चाहाना हुन्छ ? – Ujyaalo Patrika
कति वर्षको उमेरदेखि , कुन उमेर, कुन समयमा महिलालाई बढी ‘यौ’,न चाहाना हुन्छ ?
हाम्रो समाजमा से, क्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्ने चलन कमै छ । झन से, क्स कसरी भन्ने बारेमा जान्ने उत्सुकता भएपनि लाज हुन्छ भनेर चुप लाग्छन् । तर, सुखद जीवनका लागि सुखद से, क्स लाइफ हुनु जरुरी हुन्छ । आम जीवनमा से८ क्स आधारभुत आवश्यकता नै हो । जसरी सुत्नु, खानु र दैनिक कार्य गर्नुपर्छ । त्यसैगरी से, क्स पनि मानव जीवनमा आवश्यक हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा अधिकांश यस्ता परिवार छन् । जसको वैवाहिक जीवन यी कारणहरुले राम्रो बन्न सकेको छैन् । किनकी उनीहरुको से, क्स जीवनमा खुलेर गर्न सक्दैनन् । यसको सबैभन्दा ठुलो कारण हो कि हामीहरु से, क्सको बाँयोलोजिकल जानकारी लिन चाहदैनौं । अधिकांश परिवारहरु जोडीहरुलाई से, क्सको चाहनाको बारेमा थाहा नहुदाँ यस्तो भएको हो ।
हामीमध्ये धेरैलाई से, क्स गर्ने समय कति बेला हो ? कतिबेला पुरुष महिलाले से, क्स गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन् ? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशनको अनुसन्धानले पुरुष र महिलाको से, क्स गर्ने चाहना बढ्ने समय पत्ता लगाएको छ । जसअनुसार पुरूषलाई विहानको समयमा से, क्स गर्ने चाहना बढी हुन्छ । तर, से, क्सका लागि महिलाहरु मध्यरातमा रोमाण्टिक मुडमा हुन्छन् ।
अध्ययन अनुसार यो सबै से, क्स हार्माेन्सका कारणले हुने गर्दछ । रातमा महिलाहरु जब से, क्सका लागि रोमाण्टिक मुडमा हुन्छन् तब पुरुषहरु या त सुतिसक्छन्, या से, क्समा त्यती चाहना हुँदैन् । जति हुनुपर्ने हो । यस्तै समस्या विहान महिलालाई हुन्छ । त्यती बेला पुरुष से, क्सका लागि बढी रोमाण्टिक मुडमा हुन्छ । जबकि त्यो बेला महिलालाई से, क्सको इच्छा हुँदैन्।
अध्ययन अनुसार विहान ५ बजेदेखि ७ बजेसम्मको बीचमा पुरूषहरुमा टेस्टेस्टेरोनको मात्रा अत्यधिक बढ्छ जसका कारणले पुरूषको चाहना त्यो बेला से, क्सका लागि बढी हुन्छ । से, क्स लागि पूर्ण तयार रोमाण्टिक मुडमा तयार हुन्छ ।
विहानको समयमा पुरुषमा बाँकी समयको भन्दा से, क्स हार्मोन २५ देखि ५० प्रतिशत बढ्छ । महिलामा पनि टेस्टेस्टेरोनले नै से, क्स चाहना बढ्छ । तर एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोनका कारण बैलेन्समा रहन्छ । महिलाहरुमा यसको मात्रा रातमा अत्धिक बढ्छ ।
जसका कारण उनलाई रातिको समयमा से, क्स गर्न धेरै मात्रा चाहान्छन् । अध्ययनमा यो पनि भनिएको छ कि पुरुषहरु जति बढी सुत्छन् त्यती नै बढी मात्रामा टेस्टेस्टेरोन बढ्छ । जसले विहानको समयमा गर्ने चाहानालाई ह्वात्तै बढाउछ ।
Previous खुशीको खबर : अब सजिलै लाइसेन्स अनलाइन फारम भर्न सकिने भयो अनलिमिटेड . . . .
Next ‘यौ’,न आनन्द दोब्बर लिन : बनाउनुस यस्तो तालिका ! – जसले तपाइको जिबनमा फाइदा पुग्ने छ ।